» हत्या प्रकरण : ‘प्रतीकार गर्दा डोरी चुँडियो’ तर पनि पग्लिएन श्रीमतीको मन !
हत्या प्रकरण : ‘प्रतीकार गर्दा डोरी चुँडियो’ तर पनि पग्लिएन श्रीमतीको मन !
घाँटीमा गहिरो डाम बसेको थियो । डाम देखिएपछि छोप्न भन्दै मीनाले एक बट्टा पोन्ड्स पाउडर लगाइदिइन् । ११ बजेदेखि करिब आधा घण्टाको प्रयासमा दुलालको ज्यान गयो ।
६ जेष्ठ २०७७, मंगलवार २२:००
विराटनगरका औषधी व्यवसायी देवीप्रसाद दुलालको हत्यामा तीन जना संलग्न भएको पाइएको छ ।
हत्याको मुख्य योजनाकार श्रीमती मिना श्रेष्ठ दुलाल रहेको र हत्यामा गर्ने विराटनगरकै ब्रह्मदेव साह र इटहरी १२ खनारका सोनु साह छन् ।